အိုင်အို (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျူပီတာ၏ ဂါလီလီယမ်လများထဲမှ အတွင်းဘက်အကျဆုံးလ
မီးတောင်ရှင်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်နှင့် အိုင်အိုဟာ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အရ လှုပ်ရှားမှုအများဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အရ အလွန်အမင်းလှုပ်ရှားမှုများနေရခြင်းသည် အပူဒီလှိုင်းများကြောင့်ဖြစ်ပြီး ထိုဒီလှိုင်းတို့သည် အိုင်အိုင်၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် ကြာသပတေးဂြိုဟ်နှင့် အခြားသော ဂယ်လီလီယိုလများဖြစ်သည့် ယူရိုပါ၊ ဂန်မီဒီ၊ ကယ်လီစတိုတို့အကြား ဆွဲအားများကြောင့် ထွက်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သော မီးတောင်များမှ ဆာလဖာ နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့များ၊ အရည်များဟာ မျက်နှာပြင်မှ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့်အထိ ပန်းထွက်လို့နေပြီး မီးတောင်များပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တောင်ပူစာပေါင်းကလည်း ၁၀၀ ကျော်လောက် ရှိသည်။ အချို့တောင်များသည် ကမ္ဘာပေါ်က ဧဝရတ်တောင် ထက်တောင် မြင့်မားကြသည်။ အခြားသော ဂြိုဟ်ရံလများကဲ့သို့ ရေ၊ ရေခဲတို့ဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်ပဲ အိုင်အိုသည် ဆီလီကိတ်ကျောက်တုံးများ(silicate rock)ဖြင့် ဗဟိုချက်မဖြစ်သည့် သံရည်ပူ(molten iron) (သို့) အိုင်ရင်း-ဆာဖိုက်(iron-sulfide) ဗဟိုကို ဝန်းရံဖွဲ့စည်းထားသည်။ အိုင်အို၏ မျက်နှာပြင်တွင် ကျယ်ပြန့်သော လွင်ပြင်များလည်းရှိပြီး ဆာဖာနှင့် ဆာဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အမှုန်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်း၍ နေသည်။
နောက်ထပ်သော လေ့လာမှုများကို ကာစီနီ-ဟိုင်ဂင်အာကာသယာဉ်ဖြင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း၊ New Horizons အာကာသယာဉ်ဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာဂြိုဟ်အခြေပြု တယ်လီစကုပ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ ဟပ်ဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ သံလိုက်စက်ကွင်းများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုပြင်ဆင်
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IAUMoonDiscoveries
↑ EYE-oh, or as ဂရိ: Ἰώ
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Yeomans၊ Donald K. (13 July 2006)။ Planetary Satellite Physical Parameters။ JPL Solar System Dynamics။
↑ "The Galilean Satellites" (October 1999). Science 286 (5437): 77–84. doi:10.1126/science.286.5437.77. PMID 10506564.
↑ Classic Satellites of the Solar System။ Observatorio ARVAL။ 28 September 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rathbun, J. A. (2004). "Mapping of Io's thermal radiation by the Galileo photopolarimeter-radiometer (PPR) instrument". Icarus 169 (1): 127–139. doi:10.1016/j.icarus.2003.12.021. Bibcode: 2004Icar..169..127R.
↑ Rosaly MC Lopes (2006)။ "Io: The Volcanic Moon"။ in Lucy-Ann McFadden; Paul R. Weissman; Torrence V. Johnson (eds.)။ Encyclopedia of the Solar System။ Academic Press။ pp. 419–431။ ISBN 978-0-12-088589-3။
↑ Lopes, R. M. C. (2004). "Lava lakes on Io: Observations of Io’s volcanic activity from Galileo NIMS during the 2001 fly-bys". Icarus 169 (1): 140–174. doi:10.1016/j.icarus.2003.11.013. Bibcode: 2004Icar..169..140L.
↑ Schenk, P. (2001). "The Mountains of Io: Global and Geological Perspectives from Voyager and Galileo". Journal of Geophysical Research 106 (E12): 33201–33222. doi:10.1029/2000JE001408. Bibcode: 2001JGR...10633201S.
↑ 2000 February 29, SPS 1020 (Introduction to Space Sciences)။ CSUFresno.edu (29 February 2000)။ 20 September 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Wikimedia Commons ရှိ အိုင်အို နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
Io Profile Archived 28 March 2014 at the Wayback Machine. at NASA's Solar System Exploration site
Io overview Archived 13 April 2010 at the Wayback Machine. from the University of Michigan's Windows to the Universe Archived 13 April 2010 at the Wayback Machine.
Io global basemaps[လင့်ခ်သေ] from the USGS's planetary geology website based on Galileo and Voyager images
Paul Geissler's research on Cassini observations of Io's visible aurorae Archived 18 October 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်အို_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=700052" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။